Global Voices teny Malagasy · 13 Aogositra 2018
13 Aogositra 2018
Tantara tamin'ny 13 Aogositra 2018
Angola13 Aogositra 2018
Raha efa nentina teo anoloan'ny fitsarana tamin'ny raharaha teo aloha i Marques, ity no voalohany nanafahana azy madiodio tamin'ny fomba ofisialy.
Azia Atsimo13 Aogositra 2018
Mino aho fa tratry ny sery. Tsia, tsy karazana H1N5 izany fa viriosy H2MKFC (Nihinana Akoho Natono Kentucky be loatra). Tena ilaiko izany noho ny fihinanako sakafo tsy ara-pahasalamana sy tafahoatra eny amoron-dalana. Tsy hamerina intsony!